Wiil 16 toban jir oo somali ah oo lagu toogtay kaam ku yaal Norway. | WWW.SOMALILAND.NO
Wiil 16 toban jir oo somali ah oo lagu toogtay kaam ku yaal Norway.
Posted on Luulyo 19, 2008 by Weriye2
Oslo, (s/land.no), Wiil 16-jir ah oo Somali ah islamarkaana qoxooti kaam ku jira (kaamka loogu tala galay daliyarada dadoodu yartahay) ahaa ayaa waxaa isaga oo hurda kaamka debeda laga soo toogtay qolkii uu horday oo dabaqa hoose ahaa. Dhaawacii wilkaas waxaa lagu daawaynayaa Ullevål universitetssykehus. Wiilkan xabadu waxay ka haleeshay caloosha, dhaawac halis ahini waa uu soo gaadhay. Dhakhaatiirtu waxay filayaan inuu wiilkani dhaawaca xaqdarada ah ka bedbaadho.
Boliska oo arintan baaraya ayaa sheegeen in xabada ku dhacday wiilkan ey tahay mid aad u weyn islamarkaana ey dhici karto in laga soo tuuray qoryaha fud-fudud.
Sidoo kale waxa ey ka hadleen bolisku dhaawaca wiilkan, waxeyna yiraahdeen “Dhaawacu waa mid halis ah, waxa uu maray wiilkan qaliin laakiin waxaa laga yaabaa in uu u baahdo qaliimo kale oo hor-leh”, sidaasi waxaa yiri Einar Aas oo ah madaxa boliska degmada Askar ee gobolka Akershus.
Xalay ayaa waxa ey bolisku waardiye dhigeen kaamka uu falkani ka dhacay, waxaana ey roondo ku sameynayeen xaafadda uu kaamka ku yaalo.
Wali lama hayo cida falkan ka danbeysa laakiin waxaa dabagal aan caadi aheyn arintan ilaa iyo iminka ku haya boliska.
Xabadahan ayaa la rumeysan yahay in muwaadinkan Somaliga ah ey si kama ah ugu dheceen islamarkaana aan isaga loo wadin. Qofkan soo toogtay dadka kaamka ku jira ayaa walaacbadan ku abuurtay dhaliyaradii kaamkaas degenayd iyo dadkii asalkoodu norska ahaa ee halkaas degenaa.
« SOMALILAND OO KA MID NOQOTAY SADDEXDA DAL EE UGU RAJO DHAW INAY HELAAN AQOONSI CAALAMI AH WAREYSI SOMALILAND.NO LA YEELATAY XILDHIBAAN MAXAMED CUMAR JIIR OO KU SUGAN OSLO NORWAY »